Ukukhula kuKhenko lweNtengiso yeKhontenti | Martech Zone
Ukukhula kuHluzo lwentengiso
Lwesine, ngoFebruwari 13, 2014 Lwesine, ngoFebruwari 13, 2014 Douglas Karr
Esinye sezizathu zokuba kutheni iarhente yethu ingeyiyo ivenkile yokuqulatha kungenxa yokuba injongo yentengiso ekwi-Intanethi ayisiyokuvelisa umxholo, kukukhulisa ishishini lakho. Sivelisa umxholo (ubukhulu becala i-infographics kunye ne-whitepapers) yabathengi, kodwa ukucofa ukushicilela linyathelo elinye kwisicwangciso esikhulu kakhulu. Ukuqonda ukuba ubhalela bani kwaye luhlobo luni lomxholo abawufunayo kufuneka kwenzeke ngaphambili. Kwaye xa upapasha umxholo, kuya kufuneka uqiniseke ukuba ubumbene kwaye uphakanyisiwe ngokufanelekileyo ukuze ufikelele ukufikelela kwawo.
Yintoni ukuKhula ngokuKhula?
Kukho umqobo osezantsi ekungeneni kuphuhliso lwemveliso yewebhu… kodwa ukufumana igama kungabiza kakhulu. Ukuqala kwamanqanaba okuqala ngaphandle kwemali yokubhengeza okanye yokuthengisa iimveliso zabo kuya kuza nezicwangciso zentengiso ezingezizo zokufumana abathengi abatsha ngobuninzi. Oku kwaziwa njenge ukukhula kusiko kwaye ibandakanye i-SEO, ukuvavanywa kwe-A / B kunye nokuThengiswa koMxholo.
Ukuba ufuna ibhlog yakho ikhule, unokufuna ukufunda into okanye ezimbini kwi-hacker yomxholo. U-traffic-phithi kwaye akajolisanga kwinto ngaphandle kokukhula. Le infographic iya kukunika umbono ngaphakathi kwengqondo yabo yangaphakathi kwaye ikuncede ube sisiqulatho sakho somxholo.
Le infographic evela kubantu CoSchedule, Ikhalenda yokuhlela yemidiya yoluntu yeWordPress enetoni yeempawu. QAPHELA: I-infographics sisicwangciso sokukhula esimangalisayo!
tags: UkuThengiswa kweMpahlacoscheduleukukhula kusiko
Isixhobo esifanelekileyo seMpembelelo okanye iNtatheli yokuFikelela